Orinasa fanovozan-kevitra: Mandrosoa ary mihazakazaha programa manokana momba ny varotra referral | Martech Zone
Orinasa fanovozan-kevitra: alefaso ary ampandehano ny programa momba ny varotra referral anao
Alatsinainy Martsa 22, 2021 Alatsinainy Martsa 22, 2021 Douglas Karr
Izay orinasa tsy voafetra ny teti-bola amin'ny dokam-barotra sy ny marketing dia hilaza aminao fa ny referral dia fantsom-bola ahazoana tombony be indrindra ahazoana mpanjifa vaovao. Tiako ny referral satria ny orinasa niasako dia mahatakatra ny tanjako ary afaka mahafantatra miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy mila fanampiana azoko omena. Tsy lazaina intsony fa ny olona manondro ahy dia efa atokisana ary ny tolo-kevitr'izy ireo dia milanja lanjan'ny taonina. Tsy mahagaga raha mividy haingana, mandany bebe kokoa ary mijery namana hafa ny mpanjifa voatondro:
92% ny mpanjifa referrals fahatokisana avy amin'ny olona fantany.
Ny olona dia 4x mety hividy rehefa notondroin'ny namana.
Loopan'ny referral dia afaka ahenao ny vidinao isaky ny mahazo hatramin'ny 34%
Ny fahasahiranana, mazava ho azy, dia ny fomba hanarahana ireo fanondroana ireo amin'ny fiovam-po. Ao amin'ny tontolontsika an-tserasera dia azo arahana amin'ny alàlan'ny rohy tokana ny referrals. Manana rafitra mizara ireo rohy ireo ary manara-maso ny tsirairay amin'ireo fanondroana ireo.
Factory referral dia sehatra marketing referral izay manome ny orinasanao vahaolana vahaolana amin'ny serivisy, tsotra ary feno.
Aza manahy momba ny fisoratana anarana ary mila mamolavola sy manangana sehatra hafa. Factory referral dia tonga miaraka amina pejin-tsambo efa nomanina efa vonona an-jatony izay tsy manam-paharoa na manahaka ireo pejy fanondroana ireo marika voaporofo. Azonao atao ny manamboatra ny sary, logo, kopia ary valisoa amin'ireo maodely tsirairay ireo.
Raha vao ny anao fanentanana amin'ny marketing referral namboarina, azonao atao ny manisy tanana ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny dashboard, na manentana ireo mpampiasa haka ny rohy fandefasana amin'ny fomba maro:
Amin'ny alàlan'ny rohy mizara tsy manam-paharoa ho an'ny referrer tsirairay
Amin'ny alàlan'ny kaody QR isaky ny referrer
Amin'ny alàlan'ny programa referral tafiditra ao amin'ny tranonkalanao
Ny tatitra ataonao ao Factory referral ahafahanao mijery akaiky ny fitomboan'ny programa referral anao mba hahafantaranao foana hoe iza ireo olona ambony indrindra na referinao. Azonao atao ny miditra amin'ny data amin'ny alàlan'ny dashboard na mandefa azy amin'ny alàlan'ny webhook - azonao atao koa ny manondrana ny angon-drakitrao amin'ny fotoana rehetra amin'ny maha rakitra CSV anao.
Referral Factory amin'izao fotoana izao dia miray amin'ny Hubspot ary manampy Salesforce, Intercom, Shopify, ary WooCommerce miaraka amin'ny API ho avy tsy ho ela.
Andramo maimaim-poana ny Factory referral
Fampahafantarana: Mampiasa rohy referral namboarin'i Factory referral mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: orinasa fanoratanapejy fandraisanarohy referralmarketing amin'ny referralsehatra referralrindrambaiko referral
UpLead: Manamboara lisitra Prospect B2B marina mba hampandeha ny fampielezan-kevitra sy ny fivarotana akaiky